एनसेलपछि अरु को-को छन् नेकपाको कारवाही गर्नुपर्ने लिस्टमा ? — Sanchar Kendra
काठमाडौं । अरबौं करछली गर्दै आएको एनसेलमाथि नेकपाले केहिदिन घोषितरुपमा कारवाही गर्यो । जनताको पसिनाबाट जम्मा हुने खरबौँ रुपियाँ घोटाला गरिरहेको एनसेलमाथि आफुले प्रतिनिधिमूलक कारबाही गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दावी गरेको छ ।
एनसेलको घोटाला बिरुद्ध नेकपानिकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले बिगत लामो समयदेखि नै आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ । कारवाही गर्नुअघि मात्रै पनि क्रान्तिकारीले देशभर एकसाथ एनसेलबिरुद्ध संघर्ष गरेको थियो र टावर उदाउने चेतावनी देको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत राज्यलाई तिर्न बाँकी कर तत्काल तिर्न एनसेललाई आदेश दिइसकेको छ ।
संसदीय ब्यबस्थाले देश उँभो नलाग्ने निष्कर्षसहित बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि नेकपा यतिबेला संघर्षरत छ । केहि समयअगाडी मात्रै नेकपा महासचिव विप्लवले समाजवादी ब्यबस्था ल्याउने जनताको सेना समेत तयार भइसकेको खुलासा गरेका थिए । जनयुद्ध दिवसको अवसरमा लामो समयपछि सार्वजनिक भएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा महासचिव विप्लवले भनेका छन् – ‘जनमुक्ति सेना, जनताको सेना, क्रान्तिको सेना, समाजवाद ल्याउने सेना बनेको छ । सुदृढीकरणतिर जाँदैछ ।”
एनसेलमाथिको कारवाहीपछि पनि नेकपा महासचिव विप्लवले एउटा आलेखमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भनेका छन् -‘नेपालको अर्थतन्त्रमा एनसेलले लामो समयदेखि लुट मच्चाउँदै आएको आम जनतामा स्पष्ट नै छ । हालसम्म उसले सरकारी प्रमाणअनुसार पनि एक खरब बराबर कर छली गरिरहेको छ भने खरबौँ मुनाफा विदेश पलायन गरिसकेको छ । पार्टीहरूलाई घुस खुवाएर, नेताहरूलाई भ्रष्ट पारेर, कैंयन बेला न्यायक्षेत्रलाई समेत प्रभावमा पारेर आर्थिक भ्रष्टीकरणमा असीमित प्रकारले बढावा दिएको छ ।’
एनसेलले यस्तो लुट नमच्चाओस र उसलाई उचित कारबाही होस् भनेर पार्टीले सुरुदेखि नै भन्दै आए पनि समस्या हल गर्नुको सट्टा उल्टो जनसरकार र पार्टीलाई धम्की दिने, प्रहरी प्रशासनलाई दुरूपयोग गर्ने, राज्यलाई टुप्पीमा समाएर आफ्नो स्वार्थमा घुमाउने गरेकोले जनताको मागअनुसार पार्टीले यो कारबाही गरेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
यो कारवाही पनि चेतावनीकै एउटा स्वरूप भएको उनको भनाई छ । तर तत्काल आफ्नो कमजोरी नसच्याएमा एनसेल देशबाटै बर्खास्त हुने चेतावनी महासचिव विप्लवले दिएका छन् । एनसेलमाथि कडारुपमा प्रस्तुत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको देशमा यति बेला आफ्नै सत्ता र जनसरकार छ ।
ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको दुई तिहाई सरकारका बिरुद्ध नेकपा समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरिरहेको छ । सरकार पिडित, दलाल पिडित र राज्यबाट न्याय नपाएकाहरु यतिबेला नेकपाको जनअदालतमा मुद्दा दर्ता गराईरहेका छन् । कतिपय मुद्दाहरु नेकपाको जनअदालतले समाधान गरेको पनि छ ।
तर एनसेलपछि अब नेकपाको टार्गेटमा अरु को-को छन् त ? यतिबेला धेरैको मनमा यो प्रश्न खडा भएको स्थिति पनि छ । भ्रष्ट, दलाल, कमिसनखोर र जनघाती-राष्ट्रघातीलाई देशबाटै लखेट्नुपर्छ भनेर नेकपाका नेताहरु भन्दै आएका छन । चरणचरणमा स्थानीय लेभलमा होस् या राष्ट्रिय ? यस्ता गतिविधि भइरहेका पनि छन् ।
यतिबेला नेकपा महासचिव विप्लवले प्रष्टसँग भनेका छन्- कारबाही एनसेललाई मात्र होइन, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, ऊसँग साँठगाँठ गर्नेलाई पनि हुनुपर्छ । यसमा सबै सचेत भए हुन्छ । फेरि पनि हाम्रा प्रतिबद्धता छ कि देशलाई लुट्ने र जनताको रगतमाथि भ्रष्टाचार गर्ने तत्वहरूलाई कडा दण्ड दिनुुको विकल्प जनतासँग छैन । दलाल पुँजीवादी सत्तालाई समाप्त पार्नु र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनामा गर्नु सभ्य नागरिकहरूको अधिकार हो ।’
अर्थात् कमिशनको चक्करमा एनसेलको अरबौं घोटालालाई नजरअन्दाज गर्ने या ढाकछोप गर्ने कोसिसमा लागेका तत्वहरु पनि नेकपाको टार्गेटमा छन् । महासचिव विप्लवले एनसेलमाथि नेकपाले गरेको निर्णायक कारवाहीलाई बङ्ग्याएर आफ्नो पार्टीमाथि दमन गर्ने खेल खेले ठिक नहुने बताएका छन् ।
‘सरकारले जसरी एनसेलको खरब बराबरको अपराधलाई सहायक बनाएर बम विस्फोट र मृत्युलाई मुख्य बनाउन खोजेको छ, यो एकदमै दुराशयपूर्ण एवम् षड्यन्त्रपूर्ण छ । यस पहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एनसेलले पार्टी, नेता र कर्मचारीलाई अरबौँ घुस खुवाएर कर छली गरिरहेको, देशलाई लुट्दै उल्टै दम्भी फूर्ति हाँकिरहेको समाचार छापेकै थिए, जो सत्यको थिए ।’ उनले भनेका छन्- ‘यसलाई बङ्ग्याएर हाम्रो पार्टीमाथि दमन गर्ने जुन खेल सरकारले चाल्दै छ, यो केवल कमिसन खाइसकेका विभिन्न संस्था, व्यक्तिहरूको जनघाती, राष्ट्रघाती कूकर्मलाई ढाकछोप गर्ने र एनसेललाई बचाउने दुर्नियत मात्र हो । यसमा पार्टी एकरत्ति पनि विचलित हुनेछैन ।’
एनसेलमाथि कारवाही भएपछि महासचिव विप्लवले लेख्नुभएको आलेख जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्